ထိပ်တန်း5Black Granite from India for Slabs Tiles and Kitchen Countertops
ထိပ်တန်း5အိန္ဒိယကနေအနက်ရောင်ကျောက်
5 အကောင်းဆုံးက Black ကျောက် (အိန္ဒိယ)
အိန္ဒိယထက်ပိုမိုဖို့နေရာဖြစ်သည် 300 နှမျးဖတျကြောကျ. တချို့ကကျောက်ခွန်အားဖြစ်ကြ၏, အချို့ပျက်စီးလွယ်ဖြစ်ကြပြီးအချို့တစ် pin ကိုတွင်းတွေအများကြီးနဲ့အရောင်အပြောင်းအလဲနှင့်အတူခွန်အားဖြစ်ကြ၏. အဆိုပါအနက်ရောင်ကျောက်ယေဘုယျအားဖြင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်အသုံးပြုသည်, အထိမ်းအမှတ်, အထိမ်းအမှတ, ပန်းအိုးမြို့ရိုးကိုဝတ်, နှင့်ကြမ်းခင်း. Black ကကျောက်အသုံးပြုမှုအမျိုးမျိုးရှိတယ်. အိန္ဒိယကနေအကျော်ကြားဆုံးနှင့်အမြင့်မားထောက်ခံအုကူံပက Black ကျောက်နေကြသည်အောက်ပါ :
ပရီမီယံက Black ကျောက်
အဆိုပါပရီမီယံအနက်ရောင်ကျောက်သို့မဟုတ် Absolute အနက်ရောင်ကျောက်ကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးကျောက်တစျဦးဖွစျသညျ. ဒါဟာရရှိနိုင်အမှောင်ဆုံးကျောက်. ဤသည်ကျောက်အလွန်ခဲယဉ်းသည်နှင့်တံဆိပ်ခတ်ခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး. ကောကျပဲသီးနှံကနေကြည့်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကြောင်းဒါကြောင့်အနီးကပ်များမှာ 4-5 ခြေဘဝါး. သငျသညျမီးဖိုချောင်ထိပ်နှင့်အခင်းရာတွင် Absolute က Black ကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်. သငျသညျပြားအတွက်ပရီမီယံရဲ့အရည်အသွေး Absolute က Black ဝယ်နိုင်, ကျွန်တော်တို့ဆီကအုပ်ကြွပ်နှင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများ. အသေးစိတ်များအတွက်နှိပျပါ link ကို.
Black ကက Galaxy ကျောက်ရွှေ, ငွေညိုနှင့်အတူမှောင်မိုက်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ကျောက်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်အသုံးပြုသည်, ဝတ်နှင့်ကြမ်းခင်း. ဒါဟာအရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်မြောက်ပိုင်းအာဖရိကမှာလူကြိုက်အများဆုံးကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဒီသဘာဝအရောင်ကျောက်သည်နှင့်ပိတျထားသောမလိုအပ်ပါဘူး. အဆိုပါငွေနှင့်ရွှေညိုကတော့ galaxy အတွက်ကြယ်ကဲ့သို့ထွန်းလင်း. သင်ဤသည်အောက်ပါတို့ကအနက်ရောင်က Galaxy အကြောင်းပိုမိုနားလညျနိုငျ link ကို.
The background of Black Pearl Granite is predominantly black and dark with semi-solid colored speckles. The Black Pearl isapopular color in European countries. ဤသည်ကျောက် Andhra Pradesh အတွက်ကျောက်တုံးကြီးများဖြစ်ပါတယ်. Black ကပုလဲကျောက်ကောင်တာများအောင်များအတွက်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်, ဝတ်, နှင့် headstone. အဆိုပါ Black ကပုလဲ၏အရောင်သဘာဝနှင့်ဤလှပသောကျောက်ပေါ်မှာအရောင်သို့မဟုတ်အစေးမရှိကုသမှုလည်းမရှိ. အဆိုပါ Black ကပုလဲပြားနှင့်အုပ်ကြွပ်အတွက်ရရှိနိုင်, သင်စစျဆေးနိုငျ link ကို ပိုပြီးအသေးစိတ်.
အဆိုပါ Black ကသစ်တောအဆိုပါ Agatha က Black ကျောက်ရန်အလွန်ဆင်တူသည်. Black ကသစ်တော၏ကျောက်မိုင်းအိန္ဒိယတွင်တည်ရှိသည်. သငျသညျအရည်အသွေးမြင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများနှင့်စာအုပ်လိုက်ဖက်ကြမ်းပြင်အောင်အတွက်သစ်တောက Black အသုံးပွုနိုငျ. ဒါဟာအနက်ရောင်ကျောက်ဘို့ငါတို့ 4th အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်. ဒီကျောက်အကြောင်းပိုမိုသိရန်, အဆိုပါသွားရောက်လည်ပတ်ကျေးဇူးပြုပြီး link ကို.
Rajasthan က Black အိန္ဒိယကနေအမဲရောင်ပုလဲကျောက်တစ်စျေးပေါအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါသည်, ဤအရပ်မှကျနော်တို့အိန္ဒိယကနေအကောင်းဆုံးအနက်ရောင်ကျောက်များ၏စာရင်း၌ဤကျောက်ထား. ဒါကတန်ဖိုးနည်းပစ္စည်းသည်နှင့်သင်ကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းများတွင် Rajasthan က Black အသုံးပွုနိုငျ. ဒီကျောက်၏ရရှိမှုလည်းအလွန်ကောင်းလှ၏. Rajasthan က Black မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပအသုံးပြုမှုအတွက်အလွန်အမင်းအကြမ်းခံပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်. နည်းသောစျေးနှုန်းကြောင့်, ဒါကြောင့်အိန္ဒိယအတွက်လျှင်မြန်စွာအစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းကောင်တာများအစားထိုးနေသည်. သင်ဤသည်အောက်ပါတို့က Rajasthan က Black ၏ကွဲပြားခြားနားသောပြီးနှင့်အရည်အသွေးတွေကိုစစျဆေးနိုငျ link ကို.
အိန္ဒိယကနေထိုသူအပေါင်းတို့ငါးခုက Black ကျောက်, ကြောင့်အရောင်နဲ့တောင့်တင်းဖို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကိုတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောဂုဏ်သတင်းရရှိထားပြီးပါပြီ. ဤရွေ့ကားအလွန်အားကောင်းတဲ့နှင့်တာရှည်ခံကျောက်များမှာ. အဆိုပါမူကွဲစျေးနှုန်းထဲမှာခြားနားအောင်. ငါတို့ရှိသမျှသည်တင်ပို့ရန်5အိန္ဒိယကနေအကောင်းဆုံးက Black ကျောက်.